सुदुर दैनिक संवाददाता २०७८, २० असार आईतवार १९:५५ 1300 जनाले पढ़िसके
धेरै महिलाहरु शारीरिक सुखभो’गपछि रुन थाल्छन् । यदि तपाईं आफैंले यो अवस्था महसुस गर्नुहुन्छ र सोच्नुहुन्छ कि यो तपाईंसँग मात्र हुन्छ भने हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि यो एकदम सामान्य समस्या हो । विज्ञानमा, यो समस्यालाई पोष्ट कोइटल डिसफोरिया (पीसीडी) भनिन्छ
इन्टरनेसनल सोसाइटी फर से*क्शु*अ*ल मेडिसिनका अनुसार केही महिलाहरु शारीरिक सुखभो’गपछि धेरै भावनाहरू हुन्छन् जसले उनीहरूलाई शारीरिक सुखभो’गपछि रुन थाल्छन् ।
यसको मतलब यो होइन कि उनीहरूले शारीरिक सुखभो’गको समयमा रमाईलो गरेनन् । महिला खुशी र पूर्ण शारीरिक सुखभो’ग पछि पनि रुन सक्छन् ।
क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक डा. भावना बर्मी भन्छिन्, ‘कहिलेकाँही शारीरिक सुखभो’गको समयमा महिलाहरू यत्ति उत्साहित हुन्छन् कि उनीहरूको दिमागका सबै कोषहरू सँगै काम गर्न थाल्छन् ।
यसले उनीहरूलाई सबै प्रकारका भावनाहरू महसुस गराउँछ ।
२, अपमान वा घात -धेरै चोटि यो हुन्छ कि महिलाहरू आफ्नो शरीरको बारेमा विश्वास गर्दैनन्, र उनीहरू आफ्नो शरीरको लागि लाजमर्दो महसुस गर्छन् । यही कारणले उनीहरु शारीरिक सुखभो’गपछि रोएर बस्ने गर्छन । यस बाहेक कुनै पनि नराम्रो अनुभवले दिमागलाई सँधै असर गर्छ ।
३, अत्यधिक खुशी -डा. बर्मी भन्छिन्, ‘जब लामो समयपछि कुनै महिलाले आफ्नो पार्टनरसँग शारीरिक सुखभो’ग राख्छ, पूर्ण उर्जा बाहिर आउँदछ । यसले आँखा हर्षको आँसुले भरिन् सक्छ ।’ शारीरिक सुखभो’गको समयमा अत्यधिक आन्नद मिल्दा पनि महिलाहरु रुने गर्छन । यसलाई पनि सामँन्य रुपमा नै लिने गरिएको छ ।
५, प्रदर्शन चिन्ता सामान्यतयाः पुरुषमा जस्तै, महिलालाई पनि एक समस्या आम हुन्छ । त्यो के हो भने शारीरिक सुखभो’गको समयमा कस्तो प्रदर्शन गर्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ । यदि उनीहरुको सोचनुसार केही भएन भने तिनीहरू तनावग्रस्त हुन्छन् । तनावको सीधा प्रभावले उनीहरु रोइरहेका हुन्छन् ।